Museum nke Future Dubai Tour Package
Fun na-akparaghị ókè na Museum nke Future Dubaieze 212022-05-23T17:14:31+05:30
Ụlọ ihe ngosi nka nke Future
Ụbọchị ehihie na abalị / 04 na -anọ na nkwari akụ Three Star Dubai gụnyere nri ụtụtụ.
Gaa na ebe ngosi nka nke ọdịnihu yana mbufeghachi na oche na ndabere onye nchịkwa.
Onye ọkwọ ụgbọ ala anyị ga-atụba gị na nkwari akụ na mbufe nkekọrịta.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. N'ụtụtụ, a ga-eburu gị site na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-aga n'ihu Museum of the Future.
Ụlọ ihe ngosi nka nke Ọdịnihu na-anabata ndị nọ n'afọ ndụ niile ka ha hụ, metụ, na ịkpụzi ọdịnihu anyị. Gaa na njem site na ọdịnihu nwere ike iweta olileanya na ihe ọmụma azụ ugbu a. Biputere jikere ka ị nweta ogige mmiri nke Worlds largets.
E mesịa, gaa n'ihu na Atlantis The Palm, iji nweta Aquaventure Waterpark na The Lost Chambers Aquarium.
Ntugharị na mbupụ ga-anọ n'oche onye nchịkwa.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. E mesịa lelee na Nyefee na ọdụ ụgbọ elu Dubai maka ụgbọ elu ọpụpụ gị. Onye ọkwọ ụgbọ ala anyị ga-erute ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'oge maka mbufe ọdụ ụgbọ elu gaa n'ụgbọ elu gị ma ọ bụ azụ gị.
Ụdị ụlọ: Ụlọ ime obodo price
Ịkekọrịta Otu $ 616
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 465
Agba okenye ọzọ $ 444
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ $ 378
Nkata ụmụaka na akwa ọzọ $ 436
Aha ụlọ nkwari akụ: Studio M Arabian Plaza ma ọ bụ ihe yiri ya
Typedị :lọ: Ụlọ ime obodo